Jun 29, 13 at 6:11 pm
Oromoon martii sagalee tokkoon ‘OROMUMMAA’ yaa jennu! Addunyaaf ya beeksifnu! Habashoonni daangaa keenya keeysatti, mana keenya keeysatti nu ajajuu fi gosruu barbaadu. Gama hundaanuu ammoo nuun gadi jiru. Gochaan Habashootaa akka ‘arga-dhabeessi’ isa qaroo qabu karaa itti agarsiisuuf yaalii gochuuf carraaquuti fakkaata.
Jul 1, 13 at 12:20 am
Aboo namni kun nama rabbiin ummata keenyaaf “sagalee” ykn “afaan” godhee nuuf kenne waan ta’eef lubbuu dheertuu fi beekumsa guddaa waaqni Oromoo isaaf haakennu. Jawar is really our hero. Nama Oromummaa ofii irratti afaan guutee akkas dubbchuu danda’u kana qabaatuun keenna hedduu na gammachiisa. Miidiyaa addunyaan marti dhageettu kana irra bahee carra argate kanatti fayyadamee Oromoo ol kaasee dubbachuun isaa guddaa nama boonsa. Habashoota akkatti boochise argitanii mii! Jawar jabaadhu si waliin jirraa nu sabboontotni Oromoo warri ati afaan guuttee “Oromo first” jette boonsite. Guddadhu.